Chautari Daily » विवाह गर्दै गायिका ज्योती मगर, को हुन दुलाहा ?
विवाह गर्दै गायिका ज्योती मगर, को हुन दुलाहा ?
काठमाडौं, / मंसिर १४-१२ वर्षअघि रुकुमबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न र कलाकार बन्न ज्योति मगर काठमाडौं आएकी थिइन्। रोल्पा नुवागाउँमा जन्मिएकी उनले काठमाडौं आएर गायन यात्रा थालिन्। केही समय नृत्य कलाकारका रूपमा काम पनि गरिन्।
प्रकाशित मिति १४ मंसिर २०७६, शनिबार ०४:५२